Isixhobo seMask sePakisha sezixhobo zeFektri - China iMask yokuPakisha izixhobo zoMvelisi abavelisi kunye nabaxhasi
Kulungile-100 Uhlobo lweMaski ngokuzenzekelayo Umatshini wokuPakisha
Kulungile-102 Uhlobo lweMask yokuPakisha ngokuzenzekelayo
Ukusebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo 1. Lo matshini wenzelwe ngokukodwa ukuPakisha imeko yecala ngokuzenzekelayo; Ilungiselelo 2.Carton ungenziwa ngemfuneko, ingqokelela imveliso kunye nokwakha ngokuzenzekelayo. 3.Isebenzisa indlela yokupakisha yecala ethe tye, ukuvula ngokuzenzekelayo kunye nokubeka icala kwicala lebhokisi, kunye nokuqinisekisa ukupakisha kakuhle, akukho bhloko yebhokisi. Uluhlu olubanzi lwesicelo; Unokuhlangabezana nazo zonke iintlobo zeemveliso zokupakisha. Isixhobo seteyipu esine-5 esine-edge, isixhobo sokunyibilikisa esishushu sinokunyuswa kwaye senziwe ngokwezifiso. ...
Kulungile-208 Uhlobo uMask Ukupakisha Machine
Ukusebenza okuPhambili kunye neeMpawu zoLwakhiwo Umatshini ulawulwa kukuguqulwa okuphindwe kabini, ubude bebhegi busetwe kwaye busikiwe kwangoko, inyathelo elinye endaweni, longa ixesha kunye nefilimu.Umboniso womatshini womntu, ulungelelwaniso olukhawulezayo kunye nolukhawulezayo. Icala umsebenzi self-isifo, ukubonisa isiphoso icacile. Ubuntununtunu obuphezulu bokujonga umbala wombala wokujonga umbala, ukufakwa kwedijithali kwindawo yokutywina, yenza indawo yokutywina ichane ngokuchanekileyo. Ubushushu kulawulo oluzimeleyo lwe-PID kubhetele ukuziqhelanisa ne ...
OK-902 Uhlobo Vuvu wayibopha Ukupakisha Machine
Umsebenzi ophambili kunye neempawu zoLwakhiwo Ukusuka ekondliweni okuzenzekelayo, ukwenza ibhegi kunye nokupakishwa kweemveliso konke kugqityiwe ngokuzenzekelayo. Ukuvulwa kwengxowa yokuqala yoyilo kunye nendlela yokufaka ibhegi kwenza kube lula ukutshintsha ubungakanani. Lukhetho olufanelekileyo ekupakisheni okuzenzekelayo kwemaski enye okanye ezininzi. Imodeli kunye neParameter yobuGcisa obuPhambili Imodeli ye-OK-902 isantya (iingxowa / imizuzu) 30-50 iingxowa / ubuninzi bemishini (mm) 5650mm (L) X16500mm (W) x2350mm (H) Ubunzima boMatshini (kg) 4000kg Power sup ...